MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » H.E. U Hau Do Suan Presents Credentials to Governor-General of Jamaica
U Hau Do Suan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Jamaica, presented his Credentials to His Excellency the Most Honourable Sir Patrick Allen, Governor-General of Jamaica on 22 August 2017, in Kingston.
Dated. 26 August 2017
သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်း ဂျမေကာနိုင်ငံ ဘုရင်ခံချုပ်ထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
ဂျမေကာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းသည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကင်စတန်မြို့၌ ဂ‌ျမေကာနိုင်ငံ ဘုရင်ခံချုပ် ဆာ ပတ်ထရစ် အယ်လင် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်